UMarie Curie - Umama we-Physics wamanje
Okokuqala Owesifazane owaziwayo kakhulu
UCarie Curie wayengowokuqala owaziwayo isazi senzululwazi kweli hlabathi lanamhlanje. Wayeyaziwa ngokuba ngu "Mama we-Physics Modern" ekubeni nguvulindlela wakhe emsebenzini uphando malunga nokusasazwa kwemimoya , igama alidibeneyo. Wayeyindoda yokuqala ibhinqa iPh.D. kwenzululwazi yenzululwazi eYurophu kunye nongcali weprofestile wokuqala kwi-Sorbonne. Wafumanisa kwaye wahlula i-polonium kunye ne-radium, kwaye wamisa uhlobo lwemitha kunye nemitha ye-beta.
Wawunqoba amaNewel Prizes ngo-1903 (iFiziki) kunye no-1911 (iKhemistry) kwaye wayeyindoda yokuqala yokufumana iNkqabo yeNobel, umntu wokuqala ukuphumelela kwiNobel Prizes kwizifundo ezimbini zesayensi. Wahlala ngoNovemba 7, 1867 ukuya kuJulayi 4, 1934.
Jonga: Marie Curie kwiZithombe
UMarie Curie wazalelwa eWarsaw, umntwana omncinane kunabantwana abahlanu. Uyise wakhe wayengutitshala we-physics, unina, owafa xa uMaria eneminyaka eyi-11, wayengumfundisi.
Emva kokugqwesa ngeentlonelo eziphezulu ekufundiseni kwakhe, uMary Marie Curie wazifumana, njengowesifazane, engenakho ukhetho ePoland kwimfundo ephakamileyo. Wachitha ixesha elithile njengomgcini, kwaye ngo-1891 walandela udadewabo, sele esele i-gynecologist, eParis.
EParis, uMary Marie Curie wabhalisa eS Sorbonne. Waphumelela kwindawo yokuqala kwi-physics (1893), ngoko, kwi-scholarship, ubuyele kwizinga leemathematika apho wathatha indawo yesibili (1894). Isicwangciso sakhe kwakufuneka abuyele ekufundiseni ePoland.
Uphando kunye nomtshato
Waqala ukusebenza njengomphandi waseParis . Ngomsebenzi wakhe, wadibana nesazi senzululwazi waseFransi, u-Pierre Curie, ngo-1894 xa wayeneminyaka engama-35. Batshatile ngoJulayi 26, 1895, emtshatweni womtshato.
Umntwana wabo wokuqala, u-Irène, wazalwa ngo-1897. UMarie Curie waqhubeka nomsebenzi uphando lwakhe waza waqala ukusebenza njengomfundi we-physics esikolweni samantombazana.
Ephefumlelwe ngumsebenzi kwi-uracactivity kwi- uranium nguHenry Becquerel, uMarie Curie waqalisa uphando malunga "ne-Becquerel ray" ukuze abone ukuba ezinye izinto zinekhwalithi. Okokuqala, wafumanisa i-radioactivity kwi- thorium , wabonisa ukuba i-radioactivity ayiyonto yintsebenziswano phakathi kwezinto kodwa ipropathi ye-athomu, ipropati yangaphakathi ye-athomu kunokuba ihlelwe njani kwi-molecule.
Ngo-Aprili 12, ngo-1898, wakhupha i-hypothesis yakhe ye-elementary radioactive element, kwaye wayesebenza ne-pitchblende kunye ne-chalcocite, zombini i-uranium ores, ukuhlukanisa le nto. UPeter wajoyina naye kuphando.
Ngoko uMarie Curie noPerre Curie bafumana ipolonium yokuqala (ebizwa ngokuba yiPoland yakhe yasePoland) kwaye emva koko i-radium. Bhengeze ezi zinto ngo-1898. I-Polonium kunye ne-radium zazikho kwixabiso elincinane kwi-pitchblende, kunye neenani elikhulu ze-uranium. Ukususa ixabiso elincinci lezinto ezintsha zathatha iminyaka yomsebenzi.
NgoJanuwari 12, 1902, uMarie Curie wahlula i-radium ecocekileyo, kwaye ukuchithwa kwakhe ngo-1903 kwabangela ukuba isigaba sokuqala sophando lwezesayensi sinikezelwe kwintombazana yaseFransi-yokuqala yenzululwazi yesayensi inikwe umfazi kwiYurophu yonke.
Ngo-1903, ngomsebenzi wabo, uMarie Curie, umyeni wakhe uPeter, noHenry Becquerel, banikezwa umvuzo weNobel we-Physics. Ikomidi leNobel Prize libikwe ngokuqala ukuba linika ingqungquthela kuPerre Curie noHenry Becquerel, kwaye uPerty wasebenza emva kweziganeko ukuqinisekisa ukuba uMary Curie wayinqoba ukuqatshelwa okufanelekileyo ngokubandakanywa.
Kwakukho ngo-1903 ukuba uMarie noPeter baphulukana nomntwana, bazalwa ngaphambi kwesikhathi.
Ukutyhelwa kweetyhefu ekusebenzisaneni nezinto ezinokuvuthwa kwee-radioactive kwase kuqalile ukuthatha inzuzo, nangona iiCuries azizange zikwazi okanye ziphika. Bobabini begula kakhulu ukuya kwi-1903 yomkhosi weNobel eStockholm.
Ngomnyaka we-1904, uPetros wanikwa u-professorship eS Sorbonne emsebenzini wakhe. U-professorship wasungula ukhuseleko lwezezimali kwiintsapho zeCurie-uyise kaPerre wayefudlulile ekuncedeni ukunakekela abantwana.
UMarie wanikwa umvuzo omncinane kunye nesihloko njengeNtloko yeLebhu.
Ngaloo nyaka, iiCuries zaqalisa ukusetyenziswa kwe-radiation yonyango yomhlaza kunye ne-lupus, kunye nentombi yabo yesibini, i-ve, yazalwa. U-Eva wayebhala emva koko ukubhala i-biography yomama wakhe.
Ngowe-1905, iiCuries zagqitywa zaya eStockholm, kwaye uPeter wanika iNobel Lecture. UMarie wayecaphukiswa ngqalelo ekuthandweni kwabo kunokuba benze umsebenzi wabo wesayensi.
Ukusuka kumfazi kuNjingalwazi
Kodwa ukhuseleko lwaluhlala ixesha elifutshane, njengoko uPetros wabulawa ngokukhawuleza ngo-1906 xa eqhutywe yinqwelo ehamba ngehashe kwisibhedlele saseParis. Oku kwashiya uMarie Curie umhlolokazi onoxanduva lokukhuphula iintombi zakhe ezimbini.
UMary Marie Curie wanikezwa umhlalaphantsi wesizwe, kodwa wawujika. Kwinyanga emva kokufa kukaPetros, wanikwa isihlalo sakhe eS Sorbonne, waza wamkela. Kwiminyaka emibini kamva wanyulwa uprofesa opheleleyo - umfazi wokuqala ukuba abambe isihlalo eS Sorbonne.
UMarie Curie wasebenzisa iminyaka elandelayo ekulungelelanisa uphando lwakhe, ejongene nophando lwabanye, kunye nokuphakamisa imali. I- Treatise yayo kwi-Radioactivity yashicilelwa ngo-1910.
Ekuqaleni kowe-1911, uMarie Curie walalelwa ukhetho kwi-Academy of Sciences yaseFrance ngevoti enye. U-Emile Hilaire u-Amagat uthe ngevoti, "Abasetyhini abanakuba yinxalenye yeSizwe saseFransi." UMarie Curie wenqabe ukuba igama lakhe liphinde likhethwe ngokutyunjwa kwaye akazange avumele ukuba i-Academy ipapashe nayiphi na imisebenzi yayo iminyaka elishumi. Umshicileli wamhlasela ukukhetha kwakhe.
Nangona kunjalo, ngaloo nyaka uMarie Curie wamiselwa umlawuli weLebhu ye-Marie Curie , inxalenye yeRadium Institute yaseYunivesithi yaseParis, kunye neCandelo leRadioactivity eWarsaw, kwaye wanikezelwa iSibini seNobel.
Ukuyichukumisa impumelelo yaloo nyaka kwakuyihlazo: umhleli wephephandaba uthi unxulumano phakathi koMarie Curie kunye nososayensi otshatileyo. Wayephika iityala, kwaye ukuphikisana kwaphela xa umhleli kunye nososayensi ehlele i-duel, kodwa akaxothwanga. Kwiminyaka kamva, umzukulu kaMarie noPetros watshata nomzukulu wenzululwazi enokuthi wayenayo loo nto.
Ngexesha leMfazwe Yehlabathi I, uMary Marie Curie wakhetha ukuxhasa ngenkxaso yemfazwe yaseFransi. Wabeka iindleko zakhe kwiintambo zeemfazwe kwaye zifake iibhulogi ezinezixhobo ze-x-ray ezinenjongo zonyango, ukuqhuba izithuthi kwimida yangaphambili. Waqulunqa amabini ama-x e-ray angunaphakade eFransi naseBelgium.
Emva kwemfazwe, intombi yakhe u-Irene wajoyina u-Marie Curie njengomncedisi kwi-laboratory. I-Curie Foundation yasungulwa ngowe-1920 ukuba isebenze kwizicelo zonyango ze-radium. UMarie Curie wathatha uhambo olubalulekileyo oluya eUnited States ngowe-1921 ukuba amkele isipho esivulekile sesigragram ye-radium ecocekileyo yophando. Ngomnyaka we-1924, wanyathelisa imbali yakhe yomyeni wakhe.
Umsebenzi kaMarius Curie, umyeni wakhe, kunye nabo basebenzisana ne-radioactivity kwenziwa ngokungazi umphumo walo kwimpilo yabantu. UMarie Curie kunye nentombi yakhe u-Irene unesifo se-leukemia, ngokusobala esabangela ukuba kufikeleleke kumazinga aphezulu omsakazo. Iincwadi zeMarius Curie zisasasaza kakhulu ukuba azikwazi ukuphathwa. Impilo kaMarius Curie yayibheke ngokunyanisekileyo ekupheleni kwee-1920. I-Cataracts yenze igalelo lokungaphumeleli kombono.
UMarie Curie washiya umhlala-phantsi, kunye nentombi yakhe uEva njengomlingane wakhe. U-Marie Curie wasweleka ngenxa yegazi elinomonakalo, kwaye unakho umphumo we-radioactivity emsebenzini wakhe, ngo-1934.
Inkolo: Unqulo lwentsapho lukaMarius Curie lwaluyiRoma yamaKatolika, kodwa waba ngumntu ongenakukholelwa kuThixo onokufa kukayise nonina .
Eyaziwayo Njenge: Marie Sklodowska Curie, uNkk Pierre Curie, uMarie Sklodowska, uMarja Sklodowska, uMarja Sklodowska Curie
UMargaret Pole, uTudor Matriarch kunye noMartyr
I-Biography kaTeresa waseAvila
Indlela Yokubiza IsiFrentshi 'X'
Incoko ayithethi: Imbali emfutshane ye-TV Talk Show
Ngaba Ukongeza iTyuwa ngaphantsi kweNdawo yokuThambisa yamanzi?
I-Equal Quadratic Equation ngokuPhicotha iWebhu yeeSpredishithi
Imbali yeHacky Sack
Abakhi bezakhiwo nabaBumba abazalelwa ngo-Ephreli
Ngaba uMariya, uMama kaYesu, Ukhona ngokwenene?
Into Omele Uyazi Ngomdlalo WaseRoma WaseRoma